Thanlyin TU မှ လူသေမှု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » Thanlyin TU မှ လူသေမှု
Thanlyin TU မှ လူသေမှု
Posted by gyinkalay on Aug 15, 2011 in Myanma News | 13 comments
8.8.2011 တနင်္လာနေ ့တွင်…သန်လျင်နည်းပညာ တက္ကသိုလ်မှ ပညာသင်ကြားနေသော ကျောင်းသားတစ်ဦး သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ သေဆုံးသွားသည့်ကျောင်းသားမှာ ပထမနှစ် EC မေဂျာမှ ဖြစ်ပါသည်။ 8.8.2011 သည် သူ၏ မွေးနေ ့ဖြစ်သောကြောင့် ကျောင်းအနီးရှိ ဘန် ့ဘွေးကုန်း ဆည် သို ့သူငယ်ချင်းများ နှင့် သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါသည်။ ဆည်တွင် အနည်းငယ်သောက်စားပြီး သူငယ်ချင်းများနဲ ့ပြေးလွားဆော့ကစားရင်း..အရှိန်လွန်ပြီး..ရေတွင်း ထဲသို ့ခလုတ်တိုက်ကာ..ခေါင်းဖြင့် ကျသွားပြီး မပေါ်လာတော့ပေ ။ ရေတွင်းအနက်မှာ 15 ပေကျော်သည် ဟုပြော ကြပါသည်.. ကျကျချင်း ကျောင်းသားတစ်ယောက်မှ ဆင်းဆည်သော်လည်း…သူပါပြုတ်ကျ မလိုဖြစ်ပြီး ပြန်တက်ခဲ့ရပါသည်။ ထို ့ကြောင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီသမားများအကူ အညီ တောင်းပြီး ဆည်သော်လည်း ဆည်လို ့မရဖြစ်နေပါသည်..ထို ့ကြောင့် ကျောင်းသို ့အကြောင်းကြားကာ ကျောင်းမှ တာဝန်ရှိဆရာ ဆရာမ များနှင့် ကျောင်းအုပ်ကြီးများရောက်လာပြီး…သုံးယောက်လောက်ဆင်းဆည်မှ ရလေသည်။ သို ့သော် အချိန်ကြာသွားသဖြင့် အသက်မရှိတော့ပဲ အလောင်းသာ ပြန်ရခဲ့လေသည်။ သူ၏ မွေးနေ ့မှာ ပင် သေဆုံးခဲ့ရလေသည်။ ထိုဆည်မှာ လူခဏ ခဏ စားသည် ဟုလဲ ပြောကြသည်…..။
ခေါင်းနဲ့ ကျသွားတာ ပြန်တက်မလာတာ ဆိုတော့.. တွင်းက တယောက်စာ လှည့်လို့ မရလို့လား..
ကြားရတာ စိတ်မကောင်းစရာပဲ …
သန်လျင် ပဲခူးစုဘက်မှာ ရေကန်တစ်ခုရှိတယ် .. အဲဒီကန်ဆိုလဲ နှစ်တိုင်း ကျောင်းသား ၂ ယောက်လောက် စားနေကျပဲ … အဲဒီကန်နားက ဖြတ်လျှောက်ရင်တောင် အနီးကပ်ပြီး မသွားရဲဘူး … ကြောက်လို့ …
ဟယ် သူပြောတာ့ ကျောင်းသားကျသွားတာရေတွင်းဆို၊လူစားပါတယ်ဆိုမှ ဘာလို ့ဆည်ဖြစ်သွားရတာလဲ။နည်းနည်းလွဲနေသလားလို ့ပါ
ဆည်ဆိုတာ က ဇါတ်ခုံ
ရေတွင်းဆိုတာ က ပြင်ပ လောကများ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အနာဂါတ်ရဲ့ ကြယ်တစ်ပွင့်တော့ ကြွေရရှာ ပီပေါ့ဗျာ၊
အသောက်အစား ဆိုတာပါနေတော့ မူးနေရှာတယ်နဲ့တူပါရဲ့၊
အရက် သေစာတွေကြောင့် မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်ရတယ်ထင်ပါတယ်၊ နယ်တွေမှာလဲ ဆိုင်ကယ် ကား
အက်ဆီးဒင့်တွေ ကြားရတာ အရက်သေစာသောက်ထားကြတာ များနေတာလဲတွေ့ရပါတယ်၊
တန်ဆေး လွန်ဘေး ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးကို အသောက်အစားရှိကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့အပါအဝင် အားလုံး
Just normal mistake, writing ဆည် instead of ရေတွင်း။
ခလုပ်တိုက်ပြီးကျတယ်ဆိုတော့ ရေတွင်းက အကာအရံလည်း မရှိဘူးထင်ပါတယ်
ဆည်= ရေထိန်းတာတမံများဖြင့် ကာရံထားသော ရေထိန်းဆည်။
ဆည်-(ကန်…-)၊ ဆည်တမံ၊ ဆည်တံ့-၊ ဆည်မြောင်း
ဆည်ကို ဆိုလိုတာလား။ ဆယ်ကို ဆိုလိုတာလား။ မကွဲပြားလို့ စာရေးသူဆိုလိုချက်က ရောထွေးနေတယ် ထင်ပါတယ်။
မွေးနေ့မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကန်တင်းမှာ ထိုင်ပြီး စားကြသောက်ကြလျှင် ဒီလို အဖြစ်မျိုးနဲ့ ကြုံမှာ မဟုတ်ဘူး .. အခုဟာက မွေးနေ ့အကြောင်းပြပြီး … ကျောင်းတက်ချိန်မှာတောင် အ ရက်သေစာ သောက်စားလို့ ဒီလိုဖြစ်ရတာ အပျော်ကြူးလို့ပဲ သေနေ့စေ့တယ်လို့ ကောက်ချက်ချချင်ပါတယ် … ။ သနားပေမဲ့လည်း … တခြား ကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသားတွေ အတုယူနိုင်လျှင် သိပ်ကောင်းမှာပါပဲ … ။
ဆည် မှာ ရှိတဲ့ ရေတွင်း ပါ…
ooooooooooh! MY GOD…………………
မသနားပါဘူး …. အခုခေတ်ကလေးတွေ မွေးနေ့ရောက်ရင် ဘုရားသွားပြီး တရားထိုင်မယ်မရှိဘူး …. မူးဆူသောင်းကျန်းတယ် ပိုက်ဆံဖြုန်းတယ် ….. တရားမပေါက်တော့ တစ်ယောက်တော့ ပါးပီပေါ့ …… မွေးနေ့ဆိုတာ လောက၊ကမာ္ဘကြီးနဲ့ မိခင် ဖခင်တို့ကို တစ်နေကုန်အောင် ရှိခိုး ကန်တော့ရမယ့်နေ့ ….. ကိုယ်မွေးနေ့ရောက်ရင် ဘာလက်ဆောင်ပေးမှာလဲ ကိုယ်ကြိုက်တာပြောလေ …. ကိုယ့်ကိုတကယ်ချစ်ရင် ချစ်ရဲ့ —— ကြီးကို ပေးပြီးချစ်ရဲလား … မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ကိုယ်သတ်မှတ်လိုက်မယ် …. ချစ်ကိုလည်းစိတ်မချဘူး … အရမ်းချစ်လွန်းလို့ပါ ကြိုးလေးတွေနဲ့ချည်နှောင်သလိုပဲပေါ့ ….. တစ်ခါတည်းပဲ ….. အဲလိုလေးတွေလည်း ရှိကြတယ် … ကောင်မလေးတွေ လည်း သတိထား …. ဗိုလ်ချုပ်ပြောသလို ဖြစ်မှာဆိုးလို့